Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuchengeta ganda rakatsetseka
Kana uri mwana mudiki ganda rako romuviri rinenge rakatsetseka chose uye rakanaka, asi kana wava munhu mukuru ganda rinoita kunge rakakora uye rozotangazve kuita zvimiraini vokutarida kuti rotanga kuunyana. Paunoofa wachembera rinenge raunyana pavanhu vakawanda.
Munyika dakawanda mune vima Cream zvinotengeswa zvokuzama kuti ganda rigare rakatsetseka seremwana mudiki. Ukatarisa kana kubata nokupurudzira magaro emwana ane gore rimwe chete unoona kuti ganda rake ndiro ganda rokuti ukakwanisa kuchembera unaro chingava chinhu chakanaka chose.
Tinotengesegwa makirimu akawanda chose atinozama kushandisa. Kwedu kumusha takakura tichizora mafuta evhasirina kana kuti ekusvina nzungu, uchingoti ukageza wozora mafuta kuti ganda risaoma nokutsemuka. Makirimu anoshandiswa mazuvano anodhura chose asi vashoma vedu vanoziva kuti mumakirimu awa munei.
Tinotenga iya inohi Johnson Baby Oil yokuzora vana asi ukaferefeta unohwisisa kuti muOIL iyi mune muto unowanikwa muchiZVARO ( HUMAN PLACENTA ) chemunhu chete. Kana ukazvarira mwana kuchipatara vaya manesi anogamuchira mwana vanotora PLACENTA yako vonoitengesa kumakambani akaita seJohnson vanogadzira maOIL akaita seawa. Ivo vozotora zvavanoda pa PLACENTA iya zvorasa havo zvasara.
Kozoitazve mamwe makirimu anogadzigwa nezvimwewo zvakaita se maOIL anowanikwa mumhodzi dzinobva pamiti yakasiyana siyana. Pane imwe kambani yandinobatsira kutenga shomhwe dzemhodzi kubva kunyika mbiri dzokuAfrica inozodzitengesera vanogadzira makirimu ekuzora iwaya. Tinoona kuti zvinhu zvinoshandiswa kuzama kuti ganda, zvikuru remunhukadzi, rigare rakatsetseka zvakawanda. Makirimu anowanikwa muzvitoro akawandisa asi imwe neimwe inozvirova dundundu kwahi ndini mazvikokota wekuchengetedza ganda remunhu.
Kumunhukadzi, dai zvaigona kuti ganda rirambe rakaita seromwana mudiki dai tisinganetseki kukwezva varume. Ukaongorora murume achitarisa mukadzi waasangana naye uchaona kuti anotora nguva achitarisa pane ganda rakatsetseka panoti,
mazamu (semazuvano vakawanda vanofamba hafu yemazamu iri pachena)
Zvidya (zvikuru kana zvisina kupfekedzwa uye muridzi ari munhu asina kukoresa)
Kana mazoda kurhojana uchaonazve kuti murume anohwisisa muviri wemukadzi anoda kubatabata pane ganda rakatsetseka kana wabvisa zvipfeko.
Zvokuti dai taikwanisa kuwedzera kutsetseka kweganda varume vedu vaiwedzerawo kuda kuvata nesu.
Kune zvinhu zvinoshandiswa mazuvano kugadzira inohi FACIAL MASK. Mukadzi anotora MASK iyi oizora kumeso kana muviri wese, ombogara akadaro kwema awa kana mashanu, ozoibviza ogeza, ganda rosara rakanaka zvokuti.
Unokwanisa kutenga MASK idzi kuzvitoro, kana kutenga zvinovhenganiswa zvacho wozvigadzirira. Vamwe vanongoshandisa zvinhu zvinowanikwa nyore. Zvandingoziva ini zvinohi zvinoshanda ndeizvi.
Uchi hwenyuchi chaihwo kwete hwekugadzigwa maFACTORY
Muchero we AVOCADO
Gavakava riya dete rinohi Aloe Vera
Magaka (Cucumber) akajusiwa
Ivhu dete riya rokuumba hari
Vamwe vanozvigadzirira mudzimba dzavo, vamwe vanotenga zvakatogadzigwa kare vongoshandisa. Pano handisi kuti chinoshanda ndechipi kana kuti chinoshanda kupfuura chimwe ndechipi. Ndiri kuti zama kuchengetedza ganda remuviri wako rakaita seremwana mudiki. Zvinochochogwa nevarume izvozvo.
Urume hwemurume wako.
Kune vanhukadzi vakawanda chose, zvikuru kuno kuEUROPE vakahwisisa kare kuti pane zvinhu zvinobva pamunhukadzi zvinobatsira munhurume, pozoitawo zvinhu zvinobva pamunhurume zvinobatsira munhukadzi. Chimwe chezvinobatsira munhukadzi urume hwemurume wake. Kana une murume mumba makaroorana uye muru vanhu vanomufaro pauviri hwenyu, uchahwisisa kuti murume wako anogarokupa urume panzwimbo dzomuviri wako dzakasiyana siyana.
Pamwe anokudururira muchitubu
Pamwe anokuisira padumbu
Pamwe unomushanda nemaoko kusvika abuda urume mumaoko ako
Pamwe hunobuda nesimba wozara kumeso kwako.
Pamwe kana uri kumwedzi anokwanisa kukwizira chombo pamagaro kusvika abuda urume hwosara kumusana.
Vanhukadzi vakawanda vava kuziva kuti urume ndicho chinhu chinokwanisa chose kugarisa ganda rako rakatsetseka kwenguva yakareba chose. Vakawana vnoti zviya murume abuda urume votora hwavanokwanisa kutora vozora kumese vovata vakadaro vozogeza mangwanani. Vanoziva vanoti ukazviita kwevhiki nhatu unoona wega kuchinja kweganda rako.
Chinonetsa urume ndechokuti hahuwanikwi hwakawanda pamurume wako. Zvikuru kana muchigarorhojana kakawanda, uchaona kuti anongobudisa ushoma. Ukuzve hwakawanda hunosarira muchitubu saka unowana hushomanana. Asi chimwe chinhu chandakaona ndechokuti murume akapedza kukurhoja, akabudisa chombo chikavata, ukazomutarisa kwapera kanguva unowana pamubhedha pakananga chombo chivete panyorova. Izvi zvinoreva kuti murume anochururuka urume chombo chavata kare. Saka unokwanisa kuwedzera urume hwekuzora pese paunoda kuti ganda ritsetseke. Toti hunochururuka kubva muchitubu mako, nehunobva pamurume.
Kana wada kumbozvizama hwisisa kuti kune varume vanofunga kuti vakadzi vane mishonga saka tanga waudza murume wako zvauri kuda kuita kuta asavhunduka kana akakuona uchiita. Varume vechibhoyi vanotya zvinhu zvese zvinobuda pachitubu hazvinei kuti urume hwavaisamo ivo.
Nyaya yokushandisa SEMEN FACIAL Mask iyi iri kuhi inokwanisa kuti munhu ane makore anopfuura 60 ange ane ganda seremussikana ane makore 20. Vanozviita vanoti zvinoshanda.
Isu tinoziva kuti urume hune zvakawanda zvahunoshanda. Sokuti kana une mimba ukagarorhojewa zvokupiwa urume, uye kuitawo Orgasm, unozozvara zviri nyore chose chose kupfuura mukadzi ange asina murume panguva yemimba yake, uyezve LABOUR yako inoita nguva shoma. KuRhojewa uye urume ndiwo mushonga chaiwo wekuvhura masuwo. Haukuvadzi mwana kana kukupa KIDNEY Disease.
Kana murume wako ane chigwere chesiki kana kuti che HIV, usatamba tamba nourume hwake. Rhojanai akapfeka Kondhomu uye mangopedza ngaabvise kondhomu arirase obva ageza maoko nechombo kuti pasaita zvingakupa chigwere.
Urume hwemurume wako kana asina chigwere chechihure uye asingahuri, hahuna kana dambudziko kwauri iwe kana kwaari iye. Kana washandisa maoko ako kuzora urume kumeso kana kuti padumbu (kana pane mitsetse yemimba) hazvina basa kuti uvate usina kugeza maoko.
Kune vanhu vasingahwisisi Biology vanombonyora vachiti Urume hunoitisa chigwere che Candida ndosaka vachiti akapedza kurhojewa nomurume osimuka onogeza mubhavhu kana shawa. Uku kungoshaiwavo ruzivo. Urume hukabudira muchitubu hunogaramo huri upenyu kwemazuva anosvika matatu. Kana huka sinira panze hapana chinoitika chakaipa. Chitubu chinozvigeza kubva mukati zvichienda pazhe. Ndizvo uchiona kuti ukakurura bhurugwa unowana pakaruramana nechitubu pakanyorova. Tinowanzopfeka PANTY LINER, kuti iyo inyorove bhurugwa rirambe rakaoma. Kunohi vanhukadzi vechitema vanonyorova kupfuura mamwe marudzi.
Apa ndiri kuti kana uchida kumbozama zvokuchengetedza ganda rako nourume hwemurume wako ita hako wakasununguka hapana chinoitika chakaipa. Pamwe tinongotenga zvinhu zvinodhura asi zvinoshanda tinazvo kare mumba.
Asizve kune vamwe vanosemeswa nezvinhu zvakaita seurume hwemurume kana kuti muto unobuda muchitubu, iri ngari yokuti urume hunobuda panobuda neweti. Muto wechitubu haubudi panobuda neweti asi kungoti unobva mumunhu zvinosemesa vamwe vanhu. Mate anosemesesa vakawanda asi misodzi haisemesi. Hameno kuti zvakabva kupi. Uri kuzora mwana wako JOHNSON BABY OIL yakabva pa PLACENTA dzevakadzi vausingazivi asi unosemeswa nourume hwemurume wako hwaunogamuchira mukati memuviri wako zuva nezuva. Zvine musoro here?
Iwe chingoita zvaunoda kuita asi hwisisa kuti urume hwemurume wako unoita ganda ritsetseke kupfuura dzimwe kirimu dzaungawana kupi zvako.
Posted by Mai E Chibwe at 08:00